Parisက ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး Beef Steak အကြောင်း လေ့လာရအောင်
23 Aug 2017 . 4:31 PM
[Knowledge] [Unicode below]
တစ်ပွဲကို ဒေါ်လာ ၃၂၀၀ ပေးရမယ်ဆို အံသြသွားမလား? မြန်မာငွေနဲ့ဆို ကာလပေါက်ဈေး ၄၃ သိန်းကျော်မယ်နော်။ ၁၈၄၆ ခုနှစ်က စပြီး မျိုးဆက် ၆ ဆက်လောက် လယ်အလုပ် မွေးမြူရေးနဲ့ သားသတ်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုလေးက ဆင်းသက်လာတဲ့ Alexandre Polmard ဆိုတဲ့သူ အကြောင်းလေးပေါ့။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်မှာ သူ့အဖိုး သူ့အဖေနှင့်အတူ Hibernation ဆိုတဲ့ အသားကိုဆောင်းတွင်းလောက် အေးခဲအောင် သိမ်းဆည်းပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းလေးကို တီထွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ကြသတဲ့။ ဒီနည်းက -43’C လောက်ထိကို အေးခဲမှုမှာ အသားကို သိမ်းဆည်းဖန်တီးတာပါ။ ဒီလိုသိမ်းဆည်းခြင်းက Polmard အတွက် အသားရဲ့ အရည်အသွေးကို မကျစေပဲ အချိန်တော်တော်ကြာ ထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ပါ။
ဒီတော့ 2000 vintage cote de boeuf (rib steak) လို့အမည်တွင်တဲ့ နံရိုးစတိတ် တစ်ပွဲကို ယူရို ၃၀၀၀ (ဒေါ်လာဆို ၃၂၀၀) ၊မြန်မာငွေ ၄၃ သိန်းကျော် မေးရမယ်ဗျ။
သူ့အပြောလေးက သူ့အတွက် ဒီလိုမျိုး မွေးမြူရေးလုပ်ဖို့ကို မြို့ငယ်လေးမှာ နေရာအလုံအလောက်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ မြို့လေးရဲ့ ပန်းခြံလေးတွေ တောအုပ်လေးတွေမှာ ဖြန့်ကျက်မွေးမြူရပါတယ်။ ဒီတော့ဗျာ သူတို့ မိုးရွာမယ် နှင်းစိုမယ်ဆို သူတို့အဆင်ပြေမယ့် အမိုးအကာကိုတော့ ရှာရတာပေါ့။
“နေ့စဉ် သူတို့နဲ့ ကျနော် စကားပြောဖြစ်တယ်’’
လူတိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှု ရှိသလို သူမွေးမြူထားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေမှာလည်း ရှိမှာပါလေ။ အမြဲ စိတ်သက်သာရစေတဲ့ စကားမျိုးတွေ ပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာရင်တောင် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေချင်တယ်လေ။ စိတ်ဖိစီးမှုက Glycogen and Lactic Acid ဆိုတာတွေ ထွက်စေတယ်။ အသားကို နုညံ့မှု လျော့ကျစေသလို အရသာလည်း ကျစေတယ်လေ။
သူ ယူရို သန်းနဲ့ချီ ရင်းနှီးထားတဲ့ ဒီအရာလေးက တစ်ပတ်ကို နွားကောင်ရေ ၄ ကောင်ပဲ ထွက်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ အကောင်းဆုံး စိတ်ဖိစီးမှုအနည်းဆုံး အကောင်ကို ရွေးပါသေးတယ်။
“ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးမြူထားတဲ့ အသားတွေက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နူးညံ့စွာ တည်ဆောက်ထားလို့ ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာ တင်ပြီးစားလိုက်ရင်ဖြင့် လျှာမှာခံစားစေရမှာပါ။ ထူးခြားမှု …’’
ဒီတော့ ဒီ Polmard boucherie ဆိုတဲ့ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလေးက ရွှေဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ဆင်နေပြီပေါ့။ အသားတွေကို ဖြတ်၊ သစ်သားအံဆွဲလေးတွေနဲ့ထည့် အမှောင်ထဲမှာ အလှပြပြီး ရောင်းချနေတာပါ။
ဒါတောင် ၂၈ ရက် နဲ့ ၅၆ ရက် ကြားထဲက အရွယ်ကိုပဲ ရောင်းချတာပါ။
ဒီမှာ လူတိုင်း စားနိုင် တတ်နိုင်အောင်လည်း တစ်ယောက်စာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ နီးပါးလေးတွေ ဖန်တီးထားသတဲ့။
(၇၀၀ လောက်က သူတို့ဆီမှာ ထမင်းစား ရေသောက်ရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တော်တော်များတယ်နော်)
ဒီတော့ဗျာ ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ Beef Steak တစ်ပွဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိပါလား…
တချိန် ငါ ကမ္ဘာပတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလို ဆိုင်မျိုးမှာ ဘယ်လိုစားရမယ်…
အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာအောင် သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖန်တီးမှာပါ…
Chris Dwyer လို့ခေါ်တဲ့ Food Writer ရေးထားသော World’s most expensive meat? Find it withaParis butcher ဆိုတဲ့ စာစုမှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ (CNN Travel)
တဈပှဲကို ဒျေါလာ ၃၂၀၀ ပေးရမယျဆို အံသွသှားမလား? မွနျမာငှနေဲ့ဆို ကာလပေါကျဈေး ၄၃ သိနျးကြျောမယျနျော။ ၁၈၄၆ ခုနှဈက စပွီး မြိုးဆကျ ၆ ဆကျလောကျ လယျအလုပျ မှေးမွူရေးနဲ့ သားသတျလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျခဲ့တဲ့မိသားစုလေးက ဆငျးသကျလာတဲ့ Alexandre Polmard ဆိုတဲ့သူ အကွောငျးလေးပေါ့။ ၁၉၉၀ ခုနှဈလောကျမှာ သူ့အဖိုး သူ့အဖနှေငျ့အတူ Hibernation ဆိုတဲ့ အသားကိုဆောငျးတှငျးလောကျ အေးခဲအောငျ သိမျးဆညျးပွီး ထုတျလုပျတဲ့ နညျးလေးကို တီထှငျ ရငျးနှီးမွုပျနှံခဲ့ကွသတဲ့။ ဒီနညျးက -43’C လောကျထိကို အေးခဲမှုမှာ အသားကို သိမျးဆညျးဖနျတီးတာပါ။ ဒီလိုသိမျးဆညျးခွငျးက Polmard အတှကျ အသားရဲ့ အရညျအသှေးကို မကစြပေဲ အခြိနျတျောတျောကွာ ထိနျးသိမျးနိုငျလို့ပါ။
ဒီတော့ 2000 vintage cote de boeuf (rib steak) လို့အမညျတှငျတဲ့ နံရိုးစတိတျ တဈပှဲကို ယူရို ၃၀၀၀ (ဒျေါလာဆို ၃၂၀၀) ၊မွနျမာငှေ ၄၃ သိနျးကြျော မေးရမယျဗြ။
သူ့အပွောလေးက သူ့အတှကျ ဒီလိုမြိုး မှေးမွူရေးလုပျဖို့ကို မွို့ငယျလေးမှာ နရောအလုံအလောကျမရှိပါဘူး။ ဒီတော့ မွို့လေးရဲ့ ပနျးခွံလေးတှေ တောအုပျလေးတှမှော ဖွနျ့ကကျြမှေးမွူရပါတယျ။ ဒီတော့ဗြာ သူတို့ မိုးရှာမယျ နှငျးစိုမယျဆို သူတို့အဆငျပွမေယျ့ အမိုးအကာကိုတော့ ရှာရတာပေါ့။
“နစေ့ဉျ သူတို့နဲ့ ကနြျော စကားပွောဖွဈတယျ’’
လူတိုငျးမှာ စိတျဖိစီးမှု ရှိသလို သူမှေးမွူထားတဲ့ သတ်တဝါတှမှောလညျး ရှိမှာပါလေ။ အမွဲ စိတျသကျသာရစတေဲ့ စကားမြိုးတှေ ပွောဖွဈတယျ။ သူတို့နောကျဆုံးအခြိနျရောကျလာရငျတောငျ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈစခေငျြတယျလေ။ စိတျဖိစီးမှုက Glycogen and Lactic Acid ဆိုတာတှေ ထှကျစတေယျ။ အသားကို နုညံ့မှု လြော့ကစြသေလို အရသာလညျး ကစြတေယျလေ။
သူ ယူရို သနျးနဲ့ခြီ ရငျးနှီးထားတဲ့ ဒီအရာလေးက တဈပတျကို နှားကောငျရေ ၄ ကောငျပဲ ထှကျပါတယျ။ ဒါကိုမှ အကောငျးဆုံး စိတျဖိစီးမှုအနညျးဆုံး အကောငျကို ရှေးပါသေးတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ရဲ့ မှေးမွူထားတဲ့ အသားတှကေ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ နူးညံ့စှာ တညျဆောကျထားလို့ ပနျးကနျပွားပျေါမှာ တငျပွီးစားလိုကျရငျဖွငျ့ လြှာမှာခံစားစရေမှာပါ။ ထူးခွားမှု …’’
ဒီတော့ ဒီ Polmard boucherie ဆိုတဲ့ မှေးမွူရေးလုပျငနျးလေးက ရှဆေိုငျကွီးတှနေဲ့ ဆငျနပွေီပေါ့။ အသားတှကေို ဖွတျ၊ သဈသားအံဆှဲလေးတှနေဲ့ထညျ့ အမှောငျထဲမှာ အလှပွပွီး ရောငျးခနြတောပါ။
ဒါတောငျ ၂၈ ရကျ နဲ့ ၅၆ ရကျ ကွားထဲက အရှယျကိုပဲ ရောငျးခတြာပါ။
ဒီမှာ လူတိုငျး စားနိုငျ တတျနိုငျအောငျလညျး တဈယောကျစာ ဒျေါလာ ၇၀၀ နီးပါးလေးတှေ ဖနျတီးထားသတဲ့။
(၇၀၀ လောကျက သူတို့ဆီမှာ ထမငျးစား ရသေောကျရပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ တျောတျောမြားတယျနျော)
ဒီတော့ဗြာ ဒီလောကျ ဈေးကွီးတဲ့ Beef Steak တဈပှဲ ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိပါလား…
တခြိနျ ငါ ကမ်ဘာပတျဖွဈခဲ့ရငျ ဒီလို ဆိုငျမြိုးမှာ ဘယျလိုစားရမယျ…
အိမျမကျတှေ တကယျဖွဈလာအောငျ သငျကိုယျတိုငျပဲ ဖနျတီးမှာပါ…
Chris Dwyer လို့ချေါတဲ့ Food Writer ရေးထားသော World’s most expensive meat? Find it withaParis butcher ဆိုတဲ့ စာစုမှ ကူးယူးဖျောပွပါသညျ။ (CNN Travel)